कुनै एक indifferent छ - यो गायक धारिलो तिरस्कार, वा प्रशंसा छ। यी sensations दुवै हुँदा राम्रो-ढाकिएको। यो अक्सर आफ्नो extravagant हरकतों, कार्यहरू र अफवाहहरु सबै प्रकारका दर्शक निम्न स्तरका छ, र सोही समयमा यसको उज्ज्वल सौन्दर्य, आवाज, को कुनै पनि कन्सर्ट वा शो को वातावरण संग राम्रो मिश्रण क्षमता पराउँछु। Sati Kazanovoy यी शब्दहरू। जीवनी यो हुनत यो debatable छ, प्रान्तीय Cinderella जीवनी लाग्न सक्छ।
शैतानले (को Adyghe पौराणिक कथाहरु को पूरा नाम - महाकाव्य नायक Sosruko आमा) Kabardino-Balkaria मा सामान्य Kurkuzhin गाउँमा जन्म भएको थियो अक्टोबर 2, 1982। एक trickle र भोलि पानी बैंकहरू बाहिर आउन सक्नुहुन्छ र उपत्यकाका सबै गाउँमा demolish गर्न - गाउँमा एउटा अप्रत्याशित स्वभाव आज संग eponymous नदी देखि यसको नाम पायो। यो जवान गायक को वर्ण मा असर गर्दैन?
परिवार गणतन्त्र Nalchik राजधानी सारियो जब केटी 12 वर्षको थियो। बुबा शैतान, Setgaly कजान, कडा उनको गायन पाठ प्रोत्साहन दिए। त्यो संगीत स्कूल स्नातक र त्यसपछि संस्कृति र कला को स्कूल मा नवौं ग्रेड प्रविष्ट गर्नुभयो। म एक रेस्टुरेन्ट मा प्रदर्शन कला को मूल कुराहरू सिक्ने एकै समयमा, काम गरे। पहिलो प्रेम बारे गाइरहेका pigtails एक हास्यास्पद केटी - स्थानीय टेलिभिजन च्यानलहरूमा पहिलो भिडियो कताई। त्यसपछि - संगीत को मास्को Gnessin एकेडेमी, "गाइरहेका" मा एक पाठ्यक्रम। GITIS आइपुग्दा गर्न - पछि Casanova अर्को सपना साकार गर्न सुरु गर्नुहोस्। र, पाठ्यक्रम, सबै यो समय, त्यो पप दृश्य मा तोड कोशिश थियो। यो Sati Kazanovoy को बाटो मा भने एक चिरपरिचित परियोजना यो लडाइँ जारी थियो कति, ज्ञात छैन। गायक को जीवनी धारिलो पालो गरे।
टिभी परियोजना "स्टार कारखाना" 2002 मा इगोर Matvienko द्वारा निर्देशित शैतानले मा एक ल्यान्डमार्क काम थियो। खैर, यो परियोजना मा, आफ्नो नाम केहि परिमार्जन गरिएको छ - यो अब शैतान, र Sati Kazanovoy कल गर्न थाले। जीवनी अब inextricably यो परियोजना संग र जो यो आए संगै समूह "कारखाना", संग जोडिएको छ इरा Toneva र साशा Saveliev। यो एकदम जसको संरचना त्यो जवान गायक Sati Casanova एक एकल क्यारियर पछि लाग्न निर्णय नगरेसम्म परिवर्तन भएको छैन 8 वर्ष स्त्रिहरु, भएको थियो।
जहाँ अक्सर गायक द्वारा सुनेपछि, अफवाहहरु लागि स्वतन्त्रता त यो व्यक्तिगत क्षेत्र हो यो। त्यो, त्यसपछि उहाँले विवाह को रद्द घोषणा, र त्यसपछि केही oligarch संग उनको आँधी रोमान्स बारे अफवाहहरु लीक ... आफ्नो मातृभूमि बाट एक निश्चित दुलहा संग आगामी विवाह घोषणा अनि हालसालै, गायक पोस्ट, अर्को (आरोप) प्रेमी संग सार्वजनिक देखा त्यो एक शानदार विवाह पोशाक मा चमकता जहाँ सामाजिक मिडिया फोटो, र एक संवाददाता पाठ समर्थन: "Sati Casanova विवाह पोशाक मा प्रयास!" तर, यो उनको मोडेलिंग सर्वेक्षण यस भाग सम्भव छ - हामी थाहा छ, त्यो धेरै विज्ञापनहरु मा तारा अङ्कित। यो उनको जीवन मा मुख्य मूल्य जसको लागि त्यो चरण परित्याग आनाकानी गरेनन् छ - एकै समयमा सबै साक्षात्कार मा गायक परिवार भनेर जोड दिए। शायद यो पनि यहाँ निष्कपट Sati Casanova? जीवनी, राष्ट्रियता (खैर, त्यो Kabardinka, र यो राष्ट्र सख्त नैतिकता लागि जानिन्छ) कहीं पनि उनको जीवन भूमिका खेल्छन् पर्छ? जबसम्म, पाठ्यक्रम, यो capricious सौन्दर्य चाहन्छु।
"म चाहन्छु र म मूर्ख हुनेछ!"
र चाहनु? उदाहरणका लागि extravagant escapades, फेशन पत्रिका लागि स्पष्टवादी फोटोग्राफी संग यसको शब्दहरू बीच धेरै कठोर अन्तर। तुरुन्तै अर्को यसलाई त्यो राम्रो-गर्न-अनुहार र चाँदी बेल्ट देखाउँछ, उनको हजुरआमा देखि जन्मजात थियो जो Circassian राष्ट्रिय पोशाक, देखा - यो मात्र विवाह दिन गर्नेछन्।
तबसम्म त्यो, युवा र सौन्दर्य साथ चमकता को 35th तल्ला मा एक घर मा, राजधानी बसोबास, आमाबाबु र तीन जवान बहिनीहरूलाई प्रदान गर्दछ र पाठ्यक्रम, काम धेरै गायिका र प्रस्तोता रूपमा फरक शो र परियोजनामा सहभागी, क्लिप हटाउन। म, आयोजित "जस्तो छ" थियो र परियोजना Anton Makarska र Sati Kazanovoy प्रमुख "ओपेरा को प्रेत" विशेष गरी पहिलो च्यानल को मस्यौदा उनको जीवंत प्रदर्शन सम्झना। गायक को जीवनी अझै पनि ठाडो पालैपालो बनाउँछ, र यो स्पष्ट, यो विरुद्ध छ। परियोजना मा "का विवाह गरौं" Sati गीत के सार्वजनिक फेरि स्तब्ध "मूर्ख", गाए। स्मार्ट केटीहरू र मूर्ख मा, prudes र मुखर महिलाहरु मा - तर अब, यो देखिन्छ, यो सबै अभिनय छ भन्ने विश्वास गर्छन् गर्न समय छ। Rihanna र Nana Bregvadze, dima Bilan र सोफिया Rotaru - छैन परियोजना मा केही लागि "को रूपमा छ," त्यो एक पूर्ण विपरीत व्यक्तित्व परिणत गर्न व्यवस्थित। पक्कै परे के हो - यो गायक धेरै प्रतिभाशाली र उज्ज्वल छ र जहाँ प्रतिभा त्यहाँ र अस्पष्ट बयान छ।
Arseny Borodin: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
"अस्केलाली" - जर्जियाको धेरै हृदयबाट सिग्नेक
रेस्टुरेन्ट "तांग" Mayakovskaya: ग्राहक समीक्षा, मेनु, सम्पर्क विवरण
Ustinova Tatyana: जीवनी, पुस्तकहरू, चलचित्रहरू